Midabada Tattoos: astaamaha iyo qaybaha | Tattoo
Midabada Tattoo: astaamaha iyo qaybaha
Irene Rubio Gregorio | | Tattoos
Ma aqaano inay waligaa kugu dhacday, laakiin naftaada geli xaaladda soo socota: markaad ka fikirto wax badan ama wax yar, waxaad go'aansatay inaad sameysid tattoo-kaaga ugu horreeya, ama aad mid uun hesho. Maxay yihiin su'aalaha maskaxdaada ka gudbaya? Laba arrimood oo aasaasi ah ayaa maskaxdaada ku soo dhacaya: MAXAY Tattoos igu dhacdaa? Y WAA MAXAY midabada ugu fiican ee TATUFO iyo WAA yaAN doortaa
Hagaag, waxaan rajaynayaa in maqaalkani kaa caawin karo, xitaa xoogaa, si meesha looga saaro shakiga labaad.
9 Sida loo doorto midab
Waa midabka ugu badan ee la dalbado ee loogu talagalay tattoos iyo wuxuu leeyahay laba-geesood macnaheeda: marka dhinac laga eego, waxay astaan ​​u tahay xoog, laakiin, dhinaca kale, waxay kaloo la xiriirtaa fikradaha mugdiga ah, dhimashada, xanuunka ama baroor-diiqda.
Khad madow ayaa lagu sameeyaa saldhiga dhuxusha. Dhadhka midabkani uma badna inuu keena xasaasiyad, in kastoo qaar ka mid ah ay ku jiraan maadada loo yaqaan 'phenol' (waa wax soosaaray benzene), taasoo ka fal celin karta maqaarka dadka qaarkood.
Casaanka, gadaashiisa madow, mid ka mid ah midabada ugu badan ee la codsado. Tattoos-ka midabkan leh sidoo kale waa qadaadiic laba dhinac ah: hal dhinac, waxay astaan ​​u noqon karaan halista; dhanka kale waxay kaloo matalayaan qiiro iyo kalgacal.
Sida khadadka, midka midabka cas ayaa u nugul xasaasiyadda. In kastoo aysan dhammaantood sababi karin, inbadan oo kamid ah waxaa laga sameeyaa meerkuri, taas oo sababta xasaasiyadda.
Midab cad dhaqan ahaan waxay u ahayd midabka nadaafadda, nabadda iyo muqaddaska. Waa midabka ugu habboon ee loogu talagalay tattoos arooska, sida kuwa siddo hawlgelinta oo aan maalmo ka hor ka hadalnay.
Khad cad waxaa laga sameeyaa titanium ama zinc oxide, sidaa darteed waxay aad ugu nugul tahay inay keento xasaasiyad.
Midabkani si dhif ah ayaa loo isticmaalaa, laakiin markii la sameeyo, u yeeri karaa dabeecadda, si sax ah sababtoo ah midabka qaybo badan oo ka mid ah: alwaax, dhulka ... Sidoo kale, maxaa yeelay waa midab madow, waxay kaloo matali kartaa xoog, xasillooni ama dayrta, taas oo ah xilli la xidhiidha midabkan.
Khad bunni ah ayaa laga sameeyay casaanka Venetian (inbadan oo kafiican casaanka, inkasta oo magaceeda). Midabbadaani waxay leeyihiin ferric oxide ama cusbada cadmium ee halabuurkooda, waxayna ku falcelin karaan iftiinka.
Este waa midabka hal-abuurka, farxadda iyo fikradaha togan, laakiin sidoo kale qorraxda iyo iftiinka. Taas bedelkeeda, mararka qaarkood waxay sidoo kale la xiriirtaa cudur ama xaasidnimo, markaa waa inaad ka taxaddartaa naqshadda aad dooratay.
Waxyaabaha astaamaha u ah midabkani waa cadmium iyo cadmium sulfite, kuwaas oo waliba ah kuwa sababi kara xasaasiyad.
Buluug waa midabka badda iyo cirka, markaa waxay kuxirantahay xorriyadda. Waa midab qabow, markaa way wanaagsan tahay in la metelo xasilloonida iyo nasashada.
Khad buluug ah waxaa laga sameeyaa cusbada ku jirta cobalt, taas oo mararka qaarkood sababi karta fal-celin xasaasi ah.
Cagaar waa midabka dhalinyarada, sidoo kale midabbo kale oo dabiici ah, maadaama cunsurro badan oo ka mid ah, sida caleemaha, ay yihiin midabkan. Waa mid caadi ah in la matalo guga.
Khadka cagaaran wuxuu ka kooban yahay chromium. Noocyo badan ayaa sababi kara cambaar ama cuncun.
Waa midabka xasilloonida, cibaadada, awoodda ruuxiga ah. Waxay kaloo matali kartaa madmadow, maadaama ay iskujirto casaan iyo buluug, maadaama ay yihiin laba midab oo iska soo horjeed ah. Iyada oo ay taasi jirto, waa midab aan caadi ahayn oo loo isticmaalo tattoos.
Khad violet, iyo sidoo kale guduud, waxaa laga helaa magnesium waxayna sababi kartaa granulomas.
Sida loo doorto midab
Marka macnayaasha oo dhan la ogaado, waa inaad ogaataa inaysan kuwani ahayn waxa keliya ee xisaabta lagu darsado. Midabku waa inuu ahaadaa mid waafaqsan qaabeynta loogu talagalay. Sidoo kale waa inaad fiirisaa midabka jirkeena, ogow sida midab kastaa u saarnaan doono. Ugu dambeyntiina, dabcan, waa inaan ku tijaabinnaa khadadka aan ku sawireyno iyo, haddii aan xasaasiyad ku qabno, waa inaan ka tagno fikradda si loo helo tattoo midabkaas ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Tattoos » Midabada Tattoo: astaamaha iyo qaybaha
Tattooyada caanka ah: qaladaadkooda waaweyn ee lammaane ahaan
Tattoo wadnaha oo leh ubax